Posted by abc staff.3years, 1 month ago
यि आङकाजी कि भाङकाजी ?
काठमाडौं । कुनै बेला सञ्चारकर्मीलाई नै आक्रमण गर्न उत्रिए । कहिले ‘क्षेत्री–बाहुन काटिन्छ, आलो रगत चाटिन्छ’ भन्दै कुर्लिए । कहिले गृहमन्त्रीलाई मार्नुपर्छ त कहिले यो मुलुकबाट क्षेत्री–बाहुनलाई लखेटेपछि मात्र जनजातीको हित हुने जस्ता उग्र नारा र क्रियालापमा सहभागी बने । पटकपटकको उनको उग्र नारा र विचारलाई सामान्य नागरिकले स्वतन्त्र विचार राख्न पाउने कानूनलाई पालना गर्दै वेवास्ता गर्‍यो । पटकपटक दिएका उनका उग्र अभिब्यक्तिका कारण उनी धेरैपटक विवादमा मुछिए । तैपनि उनको व्यबहार सुघ्रिएन् । अन्तत: महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले तिनै आङकाजी शेर्पालाई पक्राउ गरेपछि उनी ‘नुन खाएको कुखुरो’ झै प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
Posted by abc staff.3years,2months ago
नेपाली युवाको दिल्ली र काबुलको सडकमा बास
काठमाडौं । बैशाख १२ को महाभूकम्पपछि उत्पन्न अबस्थालाई मध्यनजर गरी युवाहरुलाई विदेशको मिठो सपना देखाएर मानब तस्करी गर्ने दलालहरु ठग्न तल्लिन हुन थालेका छन् । कास्की जिल्ला लेखनाथ–१ घर भएका विकास लामालगायत आधा दर्जन यूवाहरु दलालको चंगुलबाट उम्केर बल्लतल्ल नेपाल आएका छन् । भारतको दिल्लीमा सक्रिय दलाल रमेश पुनले बोलाएपछि विकासलगायत आधा दर्जन युवाहरु बैशाख २७ गते नेपालबाट दिल्लीको पटेलनगर हालिएका थिए । राजधानीमा नै सक्रिय उनको समूहका सदस्यले लामालाई बैशाख २७ गते नेपालबाट दिल्ली पटेलनगर जान भनेपछि उनीहरु त्यता गएका हुन् । त्यहाँ पुगेपछि सबै भन्दा पहिला मानब तस्करी गर्ने दलालहरुका नाईके रमेश पुनसँग विकासको भेट भयो । सुरुमै पैसा ल्याएको छ कि छैन ? भन्दै सोधे र पैसा ल्याएको छैन भनेपछि उनको समूहले बिकासलगायतलाई एक रेष्टुरेन्टमा राखेर विश्वास दिलाउन थाले ।